Wadaadkii ka istaagay masaajidka Garoowe wuxuu yiri: ‘waa in la gubo dadka qaba AIDS-ka” | Somalilandhorta
Browse: Home / Wadaadkii ka istaagay masaajidka Garoowe wuxuu yiri: ‘waa in la gubo dadka qaba AIDS-ka”
Wadaadkii ka istaagay masaajidka Garoowe wuxuu yiri: ‘waa in la gubo dadka qaba AIDS-ka”
Posted by Yasmin Ahmed on December 2, 2019 in Warar | 6 Views | Leave a response
Bashiir Cismaan Cawad oo ka mid ah dadka la nool cudurka HIV-ga
“Waxaan la socday nin mardhow laga helay xanuunka HIV oo aan wacyigelin u sameynayay. Laakiin cudurka waxaa ka sii xanuun badan waxa nafsiyan qofka haya iyo fakarka ku jira”, ayuu yiri, Bashiir Cismaan Cawad oo ka mid ah dadka la nool xanuunka HIV, ee daggan magaalada Garoowe.
Saynab Faarax: ”Aniga iyo ninkayguba waxaan qabnaa HIV Aids, ninkaygii horana isla cudurkan ayuu u dhintay”
“Dadka qaba cudurkan guryaha inay kireystaan looma oggola, haddii iyagoo daggan la ogaadana waa laga saaraa. Waxaa jira qof ilmihiisii inkiray, gabar baa xanuunka HIV laga helay ka dibna waxaa inkiray labadeedii waalid, arrintaasna anigaa og, marka waxaan rabaa in dadku ay fahmaan in waxan uu yahay xanuun na haya oo loo baahan yahay in si wadajir ah looga hortago si uusan dhibaato kale u keenin”.
“Annagoo masaajid ku jirna oo salaadda inaan galno isku diyaarineyna ayuu wadaad istaagay, wuxuu sheegay hadallo aad u qallafsan oo ka dhan ah dadka qaba xanuunka HIV-AIDS. waxaa hadalladiisii ka mid ahaa: ‘cudurka AIDS-ka kuma dhaco dadka Islaamka ah, dadka la nool cudurkaas waxaa la rabaa in la gubo’, waxyaabo kale oo aan aad uga sii naxayna wuu ka hadlay”, ayuu yiri.
HIV waa xanuun ay dad badan oo ku nool Soomaaliya qarsadaan, sida uu BASHIIR U SHEEGAY bbc-DA
“Horta inta aanan wax jawaab ah bixinin, anigoo iska fadhiya oo waxaas iska dhageysanaya ayaa waxaan fiiriyay ninkii aan la socday, ee cudurka ku cusbaa, waxaan arkay isagoo ilmeynaya, hoos ayuu u oynayay dadkana wuu iska qarinayay. Islamarkiiba intaan ninkii hadlayay garab istaagay, iyadoo dad badanna i maqlayaan, ayaan ku iri xanuunka aad sheegeyso aniga ayaa la nool, qofka koowaad ee aan durayana waa adiga, waana ku dilayaa, anigoo markaas u dhaaranaya, sababtoo ah waxaa iga tan batay xanaaqa, saameyn aniga uu hadalkiisa igu yeeshayna ma ahayn ee waxay ahayd markaan u dulqaadan waayay ninkii aan la socday ee ilmeeyay”.
“Dadka waxaan dhihi lahaa cudurkan hallaga run sheego, aniga kula hadlaya ayaa qaba, marka dadka qaba xanuunkana si fiican haloola dhaqmo, oo yaan lagu kallifin inay qariyaan, arrintana colaad yaan laga sii abuurin”, ayuu yiri Bashiir.
Meel safar saacad ah magaalada kaga beegan dhanka galbeedka, waxaa ku nool Sacdiyo – waa magac aan ugu yeernay ka dib markii magaceeda saxda ah la qariyay sababo badqabkeeda la xiriira.
“Toddobo sano maarkin ninkeyga waxaa igu dambeysay 2013-k-ii, bisha kowaad. Inuu dhintay ama uu nool yahay war kama haayo”, ayey tiri Sacdiya.
Waxaa cudurka laga helay Sacdiya “mar ay isbitaalka geysay gabadheeda yar oo xanuunsatay”.
“Markii ay dhaqaatiirta baareen waxay ka heleen xanuunka HIV-AIDS. Aniga ayay sidoo kale i baareen, waana la iga helay”, ayey sheegtay.
“Waxaa la igu dhahay ka guur, meshii aan degenaa, deriskayga way i caayaan, carruurtooda ayayna igu soo direen,” ayey tiri iyadoo murugo ay ka muuqato.
Waxay intaa ku dartay: “Way i faquuqeen illaa heer aanan wax ka amaahan karin, ma jiro qof dan iga leh, nolol ama geeri.”
Waxay tilmaamtay Sacdiya, in biyaha ceelka aysan dhaansan karin, iyo in la aflagaadeyo marka ay xaafadaha dhex socoto. “Carruurta way iga garaacaan markay arkaan”, ayey sheegtay.
Markii ay bateen dhibaatooyiinka loo geysto, waxay go’aansatay in aysan guriga ka bixin, mana jirto cid ku booqata halkaas.
Jamaal – waa magaca aan ugu yeernay si aqoonsigiisa loo qariyo – wuxuu qabaa caabuqa HIV, wuxuu ku noolyahay duleedka magaalada wajeer. Halkaas ayuu u guuray ka dib markii uu la kulmay faquuq aad u daran.
“Gurigii ugu horreeyay ee aan ku noolaa markii aan guursaday, waa la iga saaray. Waxaan u guuray mid kale oo haddana la iiga daba yimid. Waxay (milkiilihii guriga) ku dheheen ‘ninka aad guriga ka kireysay waa nin xun oo qaba cudurkii weynaa”, ayuu yiri.
Jamaal wuxuu sheegay in markii uu “caatoobay” oo ay ogaadeen saaxibidiisa iyo qoyskiisaba in uu cudurka qabo ay billaabeen in ay ka cararaan oo aysan u soo dhowaan.